WTTC को लागी UNWTO को घृणा एक ट्वीट गरिएको प्रेम फोटो समावेश गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सरकारी समाचार » WTTC को लागी UNWTO को घृणा एक ट्वीट गरिएको प्रेम फोटो समावेश गर्दछ
ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • सभाहरूमा • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • साउदी अरब ब्रेकिंग न्यूज • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • यूके ब्रेकिंग न्यूज
जुलिया सिम्पसन, डब्ल्यूटीटीसी को लागी नयाँ सीईओ, र संयुक्त राष्ट्र संघ को महासचिव Zurab Pololikashvili, लन्डनमा एक साथ एक राम्रो डिनर को आनन्द लिइरहेका थिए।
यो UNWTO सल्लाहकार अनिता Mendiratta द्वारा भर्खरै ट्वीट एक तस्वीर को उद्देश्य संस्करण थियो।
दुर्भाग्यवश यो पूरा कथा होइन।
क्रसफायर मा पकडिएको मारिबेल रोड्रिगेज, विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद को लागी एक उपाध्यक्ष हो।
साउदी अरेबियाले एक राम्रो वित्त पोषित वैश्विक पर्यटन रिकभरी को संभावना उठाउँदै संगै, निजी क्षेत्र लाई बेवास्ता गर्ने स्थापित नीति र UNWTO द्वारा समयमै COVID-19 समन्वय को अनुपस्थिति अब टिकाउ छैन।
रिट्ज कार्लटन होटल रियाद मा १ 1977-मा जन्मेका UNWTO महासचिव Zurab Pololikashvili द्वारा WTTC तिर अस्वीकार को प्रकोप को तत्काल मरम्मत को आवश्यकता छ।
शीर्ष दुई सल्लाहकार र पछिल्लो दुई UNWTO महासचिव को लागी सल्लाहकार, अनिता Mendiratta, एक लक्जरी लन्डन रेस्टुरेन्ट मा खिचेको एक धेरै खुशी देखिने तस्वीर संग बचाव को लागी आए।
पर्यटन संकटमा छ, र सबै सरोकारवालाहरु र सरकार मिलेर काम गर्नु मात्र एक मात्र बाटो हो। UNWTO ठूलो अपवाद थियो।
यो धारणा साउदी अरेबिया को स्थिति मा एक नेता को रूप मा उभिन को लागी तयार छ र यसको पछाडि पैसा राखीएको छ, अरबौं डलर एकल हातमा विनियोजित विश्वव्यापी पर्यटन अर्थव्यवस्था लाई सहयोग गर्न को लागी।
एक जासूस कथा जस्तै, UNWTO Zurab Pololikashvilli, उनको शीर्ष सल्लाहकार, अनिता Mendiratta द्वारा निर्देशित, कार्य मा गए। Zurab सधैं धारणा मा आधारित नेतृत्व गर्न को लागी राम्रो थियो। एक अनजान भविष्य WTTC सीईओ को राम्रो नाम को उपयोग मा, Zurab को प्रचार मेसिन खोलेको थियो, र उनी पकडिए।
सम्झनु? यो मई २०१ in मा भएको थियो
UNWTO का महासचिव तालेब रिफाईले दुबै संगठनहरु बीचको बलियो साझेदारीको लागि विश्व यात्रा तथा पर्यटन परिषद् (WTTC) लाई हार्दिक धन्यवाद दिएका छन्।
पछिल्ला years बर्षहरुमा UNWTO र WTTC ले एक बलियो साझेदारी बनाएको छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरु लाई सँगै ल्याएर पर्यटन लाई अगाडि बढाउन र यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरु लाई सम्बोधन गर्न।
यात्रा र पर्यटन पहल मा एक UNWTO र WTTC खुला पत्र मा 2011 मा शुरू गरीएको छ, समर्थन दुनिया भर मा राज्य र सरकारका 80 भन्दा बढी प्रमुखहरु बाट प्राप्त भएको थियो। यस पहलको साथ, UNWTO र WTTC को लक्ष्य उच्चतम स्तर मा सामाजिक आर्थिक समावेशी विकास मा पर्यटन क्षेत्र को महत्व लाई बढावा दिन को लागी छ।
UNWTO र WTTC को बीच यो साझेदारी डिसेम्बर ३१, २०१ until सम्म बलियो बनेको छ। क्षेत्र को एक सार्वजनिक निजी साझेदारी को महत्व लाई महसुस गर्दै, यो निवर्तमान महासचिव, तालेब रिफाई को लागी एक नयाँ नियुक्त WTTC सीईओ, ग्लोरिया लाई आमन्त्रित गर्न को लागी महत्वपूर्ण थियो। ग्वेरा, २०१ Che मा चीनको चेंग्दूमा UNWTO महासभामा भाग लिन।
२०१T मा WTTC का सीईओ, ग्लोरिया ग्वेरा २०११ मा मेक्सिकोका पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मेक्सिको फेब्रुअरी २०११ मा मेक्सिकोका राष्ट्रपति काल्डेरनले UNWTO/WTTC पर्यटन पहलमा हस्ताक्षर गरी विश्वको heads० राज्यका प्रमुखहरुसंग हस्ताक्षर गरी पहिलो देश बन्नुभयो।
मेक्सिकन पर्यटन मन्त्री, ग्लोरिया ग्वेरा, निजी उद्योग बाट आउँदै, दुबै क्षेत्रहरु (निजी र सार्वजनिक) सँगै काम गर्न को लागी महत्व लाई स्पष्ट संग बुझे।
यो 2017 मा थाहा थिएन कि नवनिर्वाचित UNWTO महासचिव, Zurab Pololikashvili, फरक योजनाहरु थिए, र ती WTTC समावेश गर्दैनन्।
कसरी UNWTO जनवरी १, २०१ on मा रातारात परिवर्तन भयो
जनवरी १, २०१ Z मा Zurab Pololikashvili UNWTO को कप्तानी लिनुभयो।
तीन बर्ष पछि विशेषज्ञहरु सहमत हुनुहुन्छ, उहाँ यो गर्न को लागी सक्षम हुनुहुन्न।
युएनडब्ल्यूटीओ को हेराफेरीले सेक्रेटरी-जनरल जुराब पोलीकाशिविलको पुनः निर्वाचन सुरक्षित गर्न जारी छ.
UNWTO को महासचिव जो UNWTO को लागी काम गर्नु भन्दा पहिले म्याड्रिड को लागी आफ्नो देश, जर्जिया गणराज्य को लागी राजदूत को रूप मा सेवा गर्दै थिए, निजी क्षेत्र र पर्यटन मा कुनै अनुभव थिएन।
Zurab UNWTO, IATA, ICAO, र WTTC को कप्तानी लिने संगै आफ्नो अड्डा हरायो।
2018 यू मासेन्ट पीटर्सबर्ग, रूस मा NWTO महासभा, Zurab को लागी धेरै योजनाहरु लाई हटायो WTTC आधिकारिक एजेन्डा मा संलग्न गर्न को लागी र WTTC सीईओ कोठा को पछाडि बस्न बनायो।
Zurab असफल स्पेनिश यात्रा शो आग्रह, फिटुर, २०१ in मा WTTC लाई आमन्त्रित गर्न।
Zurab मे २०२१ मा कैनकन मा WTTC ग्लोबल शिखर सम्मेलन असफल हुन चाहन्थे र डोमिनिकन गणतन्त्र को सरकार को धक्का एक क्षेत्रीय UNWTO कार्यक्रम WTTC शिखर सम्मेलन को मिति संग टकराव गर्न को लागी।
विडम्बना WTTC का सीईओ ग्लोरिया ग्वेराले जुराबलाई शिखर सम्मेलनमा भाग लिन र बोल्ने निम्तो दिएकी थिइन्, तर पक्कै पनि यस्तो भएन। WTTC सदस्यहरु उग्र थिए, र टीडोमिनिकन गणतन्त्रका पर्यटन मन्त्रीले माफी मागे र UNWTO कार्यक्रम स्थगित।
यो मे २ 27, २०२१, रियाद, साउदी अरब मा थियो
ओ को लागी समारोह मारियाद मा UNWTO क्षेत्रीय केन्द्र को peningसाउदी अरेबिया, UNWTO का महासचिव Zurab Pololikashvili उनको शाही महारानी राजकुमारी हाइफा अल साउद, रणनीति र लगानी को लागी पर्यटन उप मंत्री, र राज्य को पर्यटन मन्त्री, महामहिम अहमद अल Khateeb को साथमा सामेल हुनुहुन्थ्यो आधिकारिक रूपमा कार्यालय खोल्नुहोस्.
उनीहरु मध्य पूर्व र अन्य सबै विश्व क्षेत्र बाट पर्यटन मन्त्रीहरु संगै निजी क्षेत्र बाट नेताहरु द्वारा सामेल थिए।
माननीय जमैका बाट मन्त्री एडमंड बार्टलेट र माननीय। मन्त्री नजीब बलाला कार्यक्रम मा उपस्थित थिए, जब Zurab Pololikasvili रियाद मा5सितारा रिट्ज कार्लटन होटल को होटल लबी मा एक दृश्य साक्षी कारण थियो।
Zurab Maribel रोड्रिग्वेज को लागी किन यति कठोर थियो?
जुराबले २ly मे, २०२१ मा साउदी अरेबियाको रियादमा UNWTO क्षेत्रीय केन्द्रको उद्घाटनमा भाग लिन WTTC लाई आमन्त्रित नगर्न आग्रह गरे।
फलस्वरूप WTTC को उपाध्यक्ष, Maribel रोड्रिग्ज, आयोजक द्वारा समारोह मा उपस्थित नहुन आग्रह गरिएको थियो। एक बिन्दुमा, जुराबले डब्ल्यूटीटीसी बाट मारिबेल रोड्रिगेज लाई अनुमति दिईयो भने आफ्नो people० जना प्रतिनिधिमण्डलको साथ कार्यक्रम छोड्ने धम्की दिए।
मारिबेल रोड्रिगेज आधिकारिक रूपमा ग्लोरिया ग्वेरा को प्रतिनिधित्व गर्दै थिए, सीईओ विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद (WTTC)। उनी म्याड्रिड, स्पेन मा उनको घर बाट उडे।
संसारमा सबैभन्दा ठूलो निजी उद्योग सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व, WTTC यात्रा उद्योग को निजी र सार्वजनिक क्षेत्र जोडिएको छ कि प्रतीक मा एक महत्वपूर्ण भूमिका छ।
UNWTO द्वारा नेतृत्व को अनुपस्थित, WTTC सार्वजनिक क्षेत्र बाट धेरै नेताहरु को संगठन मा COVID महामारी मा साप्ताहिक बैठक मा भाग लिन सक्षम थियो।
मारिबेल रोड्रिगेज 2014 मा WTTC मा सामेल हुनुभयो। उनले यात्रा र पर्यटन उद्योग सार्वजनिक र निजी क्षेत्र भित्र एक व्यापक सञ्जाल निर्माण गरीरहेकी छिन्, एयरलाइन्स र आतिथ्य उद्योग मा यूरोप र ल्याटिन अमेरिका मा बिक्री, मार्केटि communication, संचार, र व्यावसायिक अनुभव को 20 बर्ष भन्दा बढी जम्मा।
उनी २०० Executive देखि २०१४ सम्म Travelodge होटल स्पेन को लागी एक कार्यकारी वाणिज्य निर्देशक र बोर्ड सदस्य थिए।
त्यो भन्दा पहिले, उनले उड्डयन उद्योग मा ११ बर्ष बिताई, वाणिज्यिक उड्डयन को सबै पहलुहरु मा व्यापक अनुभव हासिल, अरु को बीच भर्जिन एक्सप्रेस, गो-फ्लाई, EasyJet, र दक्षिणी यूरोपीय बजार मा कम लागत एयरलाइन संचालन को परिचय को प्रबंधन को प्रबंधन। Ryanair। उनले ब्रिटिश एयरवेज स्पेन, पोर्चुगल र फ्रान्स को लागी काम गरे। Maribel ICADE बिजनेस स्कूल मा एक कार्यकारी एमबीए छ, सलामान्का विश्वविद्यालय बाट औद्योगिक मनोविज्ञान मा एक डिग्री, र IESE र JSF मा यात्रा र पर्यटन को लागी एक वरिष्ठ कार्यकारी कार्यक्रम राख्छ। उनी धाराप्रवाह अंग्रेजी, पोर्चुगिज, र फ्रेन्च र डच को एक राम्रो स्तर बोल्छिन्।
Maribel पहिलो स्पेनी नागरिक विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद मा कार्यकारी पद को यस प्रकार भएको हो।
Maribel रियाद मा रिट्ज कार्लटन होटल मा विकसित भएको थियो कि भ्रम मा थप्न चाहँदैनन्। उनी एक चिच्याउने खेलको हिस्सा बन्न चाहन्नन्, र उनी होस्टलाई शर्मिन्दा बनाउन चाहँदैनन् - साउदी अरबको सरकार।
पछि उनलाई भनियो कि उनी अब स्वागत गर्दैनन्, उनी को उत्कृष्ट सुविधाहरुको आनन्द लिईन् रिट्ज कार्ल्टन रियाद बरु होटल। उनी अझै पनी उनको छोटो प्रस्तुति दिईयो कि सधैं अर्को दिन को लागी योजना बनाईएको थियो।
हिजो अनिता मेन्डीरट्टाको प्रचार ट्वीट किन महत्वपूर्ण छ?
निस्सन्देह, UNWTO मा पनि पैसाको कुराकानी हुन्छ -र पर्यटन को लागी पैसा साउदी अरब बाट आउँछ।
WTTC का पूर्व सीईओ ग्लोरिया ग्वेरा अब साउदी अरब सरकार को लागी काम गरीरहेकी छिन्, Zurab लाई रियाद मा उत्पन्न भएको स्थिति लाई मर्मत गर्नु पर्यो।
शीर्ष सल्लाहकार र UNWTO सचिव Zurab को एक विशेष घनिष्ठ मित्र Pololikashvili दक्षिण अफ्रीकी सल्लाहकार (अब लन्डन मा आधारित) अनीता Mendiratta हो। अनिता UNWTO का पूर्व महासचिव डा तालेब रिफाई को शीर्ष सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो।
यस बीचमा डा तालेब Rifai विरुद्ध बोलिरहेको सुनेका थिए जुराब Pololikashvili सार्वजनिक रूपमा।
अनीता ती व्यक्ति थिए जसले जुरब पोलोलिकाशविली र जुलिया सिम्पसनको बीचमा धेरै महिना पहिले जुलिया डब्ल्यूटीटीसी मा आफ्नो असाइनमेन्ट शुरू गर्नु भन्दा पहिले बैठकको आयोजना गरेका थिए।
यो बैठक मे मा एक लक्जरी लन्डन रेस्टुरेन्ट मा भएको थियो WTTC अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स समूह (IAG) कार्यकारी समिति सदस्य को नियुक्ति को घोषणा पछि, जुलिया सिम्पसन, यसको अध्यक्ष र सीईओ को रूप मा, प्रभावी अगस्त १५।
जुलिया अझै WTTC को लागी काम गरीरहेकी थिइनन्, तर IAG को लागी, जब उनी Zurab लाई भेटिन्। उनलाई विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद को लागी एक सीईओ को रूप मा उनको नयाँ काम को बारे मा जानकारी दिईएको थिएन।
निस्सन्देह, जुलिया UNWTO र WTTC को बीच तनाव को बारे मा अनजान थियो र तस्वीर अनिता Mendiratta द्वारा लगभग4महिना को लागी जुरब र अनीता दुवैले यो ट्वीट गर्नु भन्दा पहिले एक धेरै फरक कारण को लागी राखिएको थियो।
UNTTO WTTC संग सम्बन्ध सुधार गर्न को लागी नक्कली प्रयास
अघिल्लो UNWTO प्रशासन अन्तर्गत स्थापित संचार र गतिविधिहरु को वर्षहरु लाई बेवास्ता गर्दै, र पुरानो फोटो संग यो ट्वीट पोस्ट गरी जनता लाई गुमराह गर्नु, फेरि महासचिव कसरी आफ्नो बाटो धोखा दिइरहेका छन् को एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो एक जेम्स बण्ड फिल्म को बाहिर ताजा हुन सक्छ।
यस लेखकले अनिता मेन्डीरट्टा द्वारा पोस्ट गरिएको ट्वीट को जवाफ दिँदै भने:
सबै कारण सम्मान संग अनीता, यो एक सस्तो प्रचार पोस्ट हो।
दृश्य पछि Zurab साउदी अरेबिया मा कारण, यो धेरै स्पष्ट छ कि उनी WTTC लाई घृणा गर्दछन् र उनीहरुबाट केहि ठुलो र सार्वजनिक क्षेत्र सहित धम्की दिईन्छ। के मैले अझ धेरै भन्नु पर्छ?
अक्टोबर 21, 2021 मा 01: 35